20 Best Paying Part Time Jobs in 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 20-ka Shaqo ee Waqti-dhiman ee ugu Fiican ee Bixinta 2022
Ma aaminsan tahay in si aad u hesho maciishada macquulka ah, ay tahay inaad shaqeyso in ka badan 40 saacadood usbuuc kasta? Gabi ahaanba ma lama huraan baa in aad ka qabato shaqada dhabarka jabinta ee xafiis ka hor inta aanad awoodin in aad naftaada daryeesho?
Tani waa su'aal caadi ah oo ay weydiiyaan kuwa aaminsan in ka shaqeynta guriga ama helitaanka mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan waqti-dhiman iyo in ay madax u yihiin ay tahay waddada guusha. Yaa runtii garan kara dariiqa guusha?
Arrintu waxay tahay in badi fursadahan ganacsi ay ballan-qaadaan madax-bannaani dhaqaale oo ay ku beddelaan saacado aad u yar oo shaqo ah, ay bixiyaan dhismayaal shirkadeed oo aad u qarsoon, ama ku lug leh kharashyo la taaban karo oo leh rajo yar oo lagu soo celinayo waqti macquul ah.
Maqaalkani waxa uu sahaminayaa shaqooyinka wakhtiga dhiman ee ugu mushaarka badan, iyo waliba waxyabaha ugu dambeeyay ee dadku sameeyaan si ay nolol u helaan. Shaqooyinka halkan ku taxan waxa ay u baahan yihiin in aad sare u qaaddo xirfadaha oo aad u diyaargarowdo in aad wax barato haddii ay yihiin waxyaalo aanad hore u baadhin.
Maxaad ugu baahan tahay shaqooyinka wakhtiga dhiman ee ugu mushaarka badan?
Xirfadahaaga u beddel lacag
Ka qayb qaado dhaqaalaha wadaagga
Karti la'aantaada u beddel il dakhli
Jooji lacagtaada inay soo baxdo
U ogolow lacagtaada inay lacag badan kuu samayso
20ka shaqo ee ugu mushaarka badan waqti dhiman
3. U sheeg Bangiga
4. Nanny ama xannaaneeyaha
6. Macalinka gaarka ah ama macalinka jirdhiska
8. Hagaha Dalxiiska
10. Daaweeyaha Duugista
11. Macalinka Muusiga
12. Maamulaha Mawduuca Warbaahinta Bulshada
14. Wakiilka guryaha
16. Dhakhtarka cilminafsiga
17. Kaaliyaha Fulinta
18. Farshaxanka Qurxinta
20. Wakiilka Adeegga Macmiilka
Xirfaddu waa nooc hawleed u baahan tababar iyo aqoon gaar ah. Xirfadahani waxay noqon karaan kuwo fudud sida barashada sida saxda ah ee shaadhka ama loo shaqeeyo beer, barida DIYs iyo kuwa la mid ah iyo kuwan waa xirfadaha aan ka codsan karno internetka si aan dadka u baro.
Waxaa jira dad badan oo internetka ku jira kuwaas oo bixin lahaa lambaradooda si qof u baro sida loo sameeyo qaar ka mid ah xirfadaha aasaasiga ah ee ay jeclaan lahaayeen inay sameeyaan laakiin aan garanayn sida loo sameeyo.
Markaad xirfadahan si fiican uga faa'iidaysato, waxaad xirfadahaaga u beddeli kartaa lacag. Habkaas, kaliya ma lihid xirfado jiifa, laakiin waxaad leedahay xirfado aad ku bixin karto aduunka. Ku bixi xirfadahaaga ballaadhka shaqooyinka wakhtiga dhiman ee ugu mushaharka badan.
Haddii aad haysato wax dheeraad ah, waxaa jirta suurtogalnimo wanaagsan in qof kale uu jeclaan lahaa inuu amaahdo. Marka waxa loogu yeero dhaqaalaha wadaaga uu balaadho, waxaad heli doontaa fursado badan oo aad lacag ku soo geliso qalabkaaga aan shaqayn iyo meelaha aan la isticmaalin.
Doorashadani waxay si fiican u khusaysaa dhammaan kuwa iibsada waxyaabo aanay waligood u baahnayn sababtoo ah waxay haystaan ​​lacag ama laga yaabaa inay amaahdaan wax dheeraad ah ama sababtoo ah waxay caado u leeyihiin inay iibsadaan waxyaabo cajiib ah.
Haddii aad isku aragto in aad caado u leedahay iibsashada waxyaabo aadan u baahnayn, markaa waxaad isku dayi kartaa inaad iibsato waxyaabo tayo leh ka dibna aad ka kiraysato kuwa baahi dhab ah u qaba hadhow khadka.
Ka qayb qaadashada dhaqaalaha wadaagga waxay faa'iido u leedahay qof kasta oo ku lug leh, labadaba iibsadayaasha iyo kiraystayaashaba waxay qiimeeyaan lacagtooda.
Xaqiiqda ah in aad karti u maqan tahay shay uma baahna sabab aadan naftaada u heli karin nolol maalmeed, laakiin waa shay wanaagsan run ahaantii haddii aad u ogolaato.
Karti la'aantaada waxay ka dhigan tahay in lagu tababari karo inaad sameyso wax kale ka dibna aad naftaada u sameyso xirfad haddii aad shaqada geli karto. Kuwo badan ayaa nolosha ku noqday waxyaabo aad ugu wanagsan inkasta oo aanay jirin karti muuqata oo ay wax u leeyihiin.
Xitaa waxaa la yiraahdaa edebtu waxay u dhowdahay inay meelo kaa qaado marka loo eego kartida. Karti ama la'aanteedu uma baahna sabab lagu quusto. Iska daa naftada wax kasta oo aad baran karto ka dibna cirku waa bartaada kaliya.
XIDHIIDHKA: 17 Shaqooyin/Xirfadaha Dadka Jecel Socdaalka | 2022 La cusbooneysiiyay
Iyadoo dhimista kharashka ay faa'iido u leedahay miisaaniyadaada, habka ugu fudud ee lacag lagu badbaadiyo waa inaad hesho wax badan. Sidaas oo ay tahay, aan ku bilowno talo fudud oo ku saabsan sidii aad isaga joojin lahayd lacag luminta waxyaabaha aan run ahaantii waxtar lahayn.
Qaar badan, sababta aysan magacyadooda wax badan u haysan xitaa sababtoo ah maaha kuwo qorsheeyaal wanaagsan ama sababtoo ah ma haystaan ​​ama ma sameeyaan wax ku filan.
Sababtu waxa weeye, marka ay lacagtu ag jiifto, waa hubaal in ay jirto wax la sheegan karo, dadka badankiisuna ma garanayaan waxa ay sheeganayaan, kaliya waxa ay og yihiin in ay lacag haysteen haddana ma haystaan.
Haddii aad ka mid tahay kuwa hore u haystay shaqo mushahar fiican leh, laakiin aad dareemayso inaanay caqli-gal ahayn inaad hesho hal dakhli oo kaliya, markaa doorashadan adigaa leh.
Tani waa sababta oo ah waxaad si dhakhso ah u ogaan doontaa in aad maalgeliso qayb ka mid ah lacagta aad kasbato shay ay ku siinayso wax aad uga wanaagsan inaad ku bixiso dhammaan hal mar ama aad ku kaydsato bangiyada qaarkood.
Su'aasha iswaydiinta mudan ayaa ah tan, maxaa dhacaya marka shaqada lagaa cayriyo ama sabab la'aan, ma sii wadi kartid shaqadaada ama culeyska saaran?
Miyaad leedahay hawlgab Waalidkaaga mise ma sii waddaa inaad gurato abaal-marintii aad u oggolaatay lacagtaada inay lacag badan kuu samayso?
A shaqada bartender waa in la siiyo macaamiisha khaaska ah cabitaannada khamriga iyo kuwa aan khamriga ahayn. Macaamiisha si toos ah ayaa loo siin karaa ama waxaa laga yaabaa in cabitaano la siiyo shaqaalaha sugitaanka si loogu geeyo macaamiisha.
Sababtoo ah waxaa jira cuntooyin badan oo kala duwan oo lagu xasuusto iyo khamriyo kala duwan iyo qalabyo kala duwan oo lagu barto, shaqadu way ka sii adag tahay sida ay u muuqato.
Si aad ugu adeegto cabitaanka aalkolada sidii baqaale ahaan, waa inaad jirtaa ugu yaraan 18 jir. Bakhaarleyda intooda badan waxay wax ku bartaan shaqada, sidaas darteed waxbarashada rasmiga ah waa dhif lagama maarmaan, laakiin si wax loo fududeeyo, waxaan kugula talineynaa inaad barato waxyaabaha muhiimka ah ka hor inta aanad shaqo codsan.
Bartender ahaan, waxaad heli kartaa inaad shaqeyso wakhti dhiman dhowr habeen todobaadkii, iyo talooyin, waxaad ku dhamaan kartaa wax fiican. Inta badan bakhaarrada ayaa sameeya ugu yaraan $13.92 saacadii.
Waa inaad barataa Sida loo Noqdo Bartender oo aan Khibrad u lahayn 2022
Haddii aad u shaqeyso waqti-dhiman shirkadaha sida Uber or Lyft ama haddii aad adigu iskaa u sameyso, hawlahaaga waxaa ka mid ah abaabulka nadaafadda iyo dayactirka joogtada ah ee baabuurka la isticmaalo, qorsheynta waddo kasta oo ku xiran xaaladaha waddooyinka iyo gaadiidka, iyo habaynta lacagaha.
Ugu dambeyntii, waa mas'uuliyaddaada inaad kor u qaaddo farxadda macaamiisha mar kasta oo ay doortaan inay kula safraan, hubinta in macaamiishu kugu tiirsan yihiin dhammaan shuruudaha gaadiidka.
Waa inaad haysataa shatiga darawalnimada oo sax ah iyo diiwaanka wadista nadiifka ah oo aan lahayn xukun taraafiko si aad ugu qalanto booskan waqti-dhiman. Waxaa xusid mudan inaadan u baahnayn baabuur; maalmahan, helida meelo baabuur laga kiraysto waa sahlan tahay.
Darawaliintu waxay qaadan karaan ugu badnaan $15.56 saacaddii ama ka badan iyadoo ku xidhan arrimo badan.
Macaamiisha ganacsigooda maalinlaha ah ee macaamil maaliyadeed waxa gacanta ku haya xisaabiye bangi. Xawaaladaha, dalabaadka lacagaha, dhigaalka iyo ka bixista, iyo hubinta wax kala iibsiga waa dhammaan tusaalooyin.
Maamulaha baanku waa inuu muujiyaa wacyigelin buuxda oo ku saabsan bangiga uu u shaqeeyo, oo ay ku jiraan hababka, xeerarka, iyo, laga yaabee, ugu muhiimsan, awoodda xisaabinta lacagta iyo mas'uuliyadda.
Bixiyaha bangiga ayaa inta badan mas'uul ka ah samaynta aragtida koowaad ee togan. Waxay inta badan mas'uul ka yihiin inay macmiilka dareemaan ammaan, ka jawaabista su'aalaha khuseeya, iyo horumarinta adeegyada bangiga.
Hadafka lagu hayo shaqaale dhiman haddii loo baahdo waa in la siiyo macmiilka adeeg gaar ah si uu isaga ama iyada u sii wado ka faa'iidaysiga bangiga dhammaan shuruudaha dhaqaale.
Marka loo eego Payscale, Darawaladu waxay kasbadaan $13.93 saacadii.
Akhri: 13-ka Shaqo ee ugu Mushaarka badan Bangiyada
Maqnaanshaha dadka qaangaarka ah, Baby Sitters waxaa loo xilsaaray bixinta kormeerka iyo daryeelka dhallaanka iyo carruurta. Xanaaneeyayaasha caruurtu waxay had iyo jeer u safraan guriga macmiilka si ay u gutaan adeegyadooda, laakiin sidoo kale waxay ku bixin karaan daryeel gurigooda ama goob qof saddexaad ah.
XIDHIIDHKA: 20 Shaqooyinka Ugu Lacag Badan Tamarta | 2022
Ilmo-ilaaliye haysta shahaado xagga daryeelka carruurta ah ayaa baahi weyn loo qabaa, haddana way adag tahay in la helo. Inta badan xannaaneeyayaasha waxay bilaabaan da 'yar waxayna si tartiib tartiib ah u koraan shirkaddooda.
Meheradda daryeelaha carruurta waxaa inta badan horseeda khibradooda iyo sumcaddooda. Xirfadaha koriinka iyo wada xiriirka ilmaha oo xooggan ayaa loo baahan yahay sababtoo ah xannaaneeyayaasha badankood waxay la shaqeeyaan dhallinta soo koreysa.
Isagoo shaqeeya wakhti dhiman, ilmo-xannaaneeyaha wuxuu sameeyaa ugu badnaan $11.87 saacaddii.
Sidoo kale akhri: 10 -ka Lacag ee Ugu Lacagta Badan Maraykanka | Dalalka Ugu Fiican Sanadka 2022
Xisaabiye ayaa mas'uul ka ah ilaalinta dhaqdhaqaaqa maaliyadeed sida iibka, kharashyada, dakhliga iibka, qaansheegyada, iyo lacag bixinta shirkadda. Xogta maaliyadeed waxaa la gelin doonaa buug-gacmeedyo guud, kuwaas oo loo isticmaali doono in lagu sameeyo xisaab-xidhka iyo warbixinta dakhliga.
Lixda weji ee hore ee Wareegga Xisaabinta waxa inta badan kormeera xisaabiye, halka labada dambe uu sida caadiga ah maamulo xisaabiye. Xisaabiye haddii aad hesho gig aad ku shaqayso wakhti dhiman waxa uu bixinayaa ugu badnaan $22 saacadii.
Tababbarka shaqsiyeed u fiirso macmiishooda awoodooda jireed iyo dhaliilaha oo u qaabeeya hab-socodka jirdhiska ee shakhsi ahaaneed. Waxay bixiyaan taageero jireed iyo mid shucuureed macaamiisha waxayna la socdaan horumarkooda si joogto ah.
Waxay sidoo kale hubiyaan in macaamiishu aysan waxyeelo gaarin inta lagu jiro habka tababarka. Shakhsiyaadka iyo kooxaha yaryar waxay ka faa'iidaysan karaan tababbarka shakhsi ahaaneed.
Waxaad samayn doontaa mas'uuliyado kala duwan maalin kasta, adigoo ka bilaabaya falanqaynta xaaladda jireed ee macaamiishaada iyo u samaynta hababka jirdhiska ee caadiga ah iyaga.
Waxaad muujin doontaa sida loogu isticmaalo qalabka tababarka si sax ah si looga fogaado dhaawacyada adigoo u sharaxaya jimicsiga si toos ah oo hufan. Shaqeynta waqti dhiman, waxaad heli doontaa ugu badnaan $31 saacaddii.
Adeegaha cuntada, oo sidoo kale loo yaqaan kabalyeeri ama kabalyeeri, ayaa mas'uul ka ah helitaanka dalabaadka iyo u bixinta cuntada macaamiisha makhaayadda.
Waa inay u sharxaan liiska macaamiishooda, la xiriiraan shaqaalaha jikada, oo ay dheelitiraan cuntooyinka marka ay geynayaan miiska saxda ah.
Adeegayaasha waxa lasiiyaa $13.97 saacadii inay sameeyaan waxay sameeyaan.
Hagaha dalxiiska ee wakhti-dhiman ahaan, waxaad mas'uul ka noqon doontaa diyaarinta qorshayaasha safarka, inaad barato macaamiisha aagga baabuur ama lug, iyo hubinta in kooxda la ilaaliyo mar walba. Waa inaad sidoo kale la socotaa waxyaabo cusub oo soo jiidasho leh oo kicin kara xiisaha macaamiisha.
Waa inaad noqotaa sheeko-yaqaane gaar ah oo karti u leh adeegga macaamiisha si aad ugu guulaysato hage dalxiis ahaan. Hagayaasha dalxiisku waxay helayaan $13.78 saacadii.
Macalimiinta ayaa mas'uul ka ah caawinta ardayda si ay u fahmaan culuum kala duwan. Waxay qiimeeyaan, caawiyaan, oo dhiirigeliyaan ardayda inta lagu jiro habka waxbarashada.
Khabiiradan waxay sidoo kale dulmaraan agabka loo isticmaalo fasalka, waxay caddeeyaan mawduucyo badan, waxayna ka jawaabaan dhammaan welwelka iyo su'aalaha ardayga ee ku saabsan arrintan.
Waajibaadkooda waxaa loogu talagalay inay kordhiyaan waxbarashada fasalka waxayna helayaan $18.12 saacaddii. Waa inaad ka fikirtay tani inay tahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan waqti dhiman?
Daaweeyaha duugista wakhtiga dhiman ahaan waa inaad ka caawiso macaamiisha inay hagaajiyaan wareegga, nasiyaan, oo ay yareeyaan xiisadda, xanuunka, iyo dhaawacyada adoo siinaya duugis daweyn ah.
Dhakhaatiirta duugista waxay la falgalaan khabiiro kale si ay uga caawiyaan daawaynta, sida lafopractors, takhaatiirta, cilmu-nafsiga, iyo daaweeyayaasha jimicsiga iyo ayaa la xidhay 49.87 US dollar.
Macallinka muusiga ah ee wakhti-dhiman ah, waxa lagaa filayaa inaad raacdo shuruudaha waaxda waxbarashada, oo ay ku jiraan aragtida muusiga iyo ku celcelinta guud, heesida, iyo ciyaarista qalabka muusiga. Waa inay sidoo kale caawiyaan ardayda u diyaargarowga imtixaanada muusikada.
Si aad u noqoto macalin muusiko oo wanaagsan, waa inaad abuurtaa jawi waxbarasho oo madadaalo leh kaasoo ka farxin doona maskaxda dhalinyarada kana caawin doona inay kobciyaan jacaylka muusiga. Macalinka muusiga ahaan, waxa aad helaysaa $26.47 saacadii.
Macalimiinta muusiga waa inay arkaan tan: 20 Siyaabood oo Lacag looga Helo Muusigga 2022 | Tusaha Sawirka 7aad
Maareeyayaasha Warbaahinta Bulshada ayaa mas'uul ka ah horumarinta, fulinta, maamulka, iyo la socodka istaraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee shirkadda si kor loogu qaado aqoonsiga sumadda, kor loogu qaado dadaallada suuqgeyneed, iyo kor loogu qaado iibka.
Waxaan rabnaa inaad lasocoto tignoolajiyada cusub ee dhijitaalka ah iyo isbadalada warbaahinta bulshada sida maareeyaha warbaahinta bulshada.
Waa inaad leedahay xirfado isgaarsiineed oo heer sare ah iyo karti aad si halabuur leh ugu sharaxdo fikradaha shirkadeena. Maareeyaha SM-ka wakhtiga dhiman ahaan, waxa aad helaysaa $51 saacaddii. Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan saacadaha dhiman ee aadka loogu taliyay.
XIDHIIDHKA: 13 Qof Ee Ugu Mushaharka Badan Dunida | Faallooyinka ugu Fiican
La shaqaynta koontooyinka iyo kooxaha naqshadaynta si ay uga doodaan fikrado, abuuraan fikrado, una dejiyaan fariinta, waxaad qori doontaa oo aad tafatiraysaa nuxurka mashruucyo badan (oo ay ku jiraan daabacaadda, khadka tooska ah, mobilada, muuqaalka, iyo warbaahinta bulshada).
Si loo fahmo macmiil kasta ganacsigiisa, alaabtiisa/adeegyadiisa, summaynta, iyo yoolalka suuq-geyneed, cilmi-baadhis ballaadhan iyo waraysiyo ayaa lagama maarmaan noqon doona. Halkan waxa aad ka helaysaa $25 saacadii.
A wakiilka guryaha ijaarka waa xirfadle shahaado haysta oo fududeeya wax kala iibsiga hantida ma-guurtada ah isaga oo isku siinaya iibsadayaasha iyo iibiyaha oo wakiil ka ah doodaha. Si aad tan u hesho, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad hesho shahaado.
Dallaaliinta hantida ma-guurtada ah sida caadiga ah waxaa si buuxda u bixiya komishan, markaa dakhligoodu wuxuu ku xiran yahay awoodda ay u leeyihiin inay wax kala iibsadaan. Waxa la siiyaa $21 ama ka badan maalin aad u wanaagsan.
Turjubaan ahaan, fikradayda, waa awood kale oo muhiim ah oo qof walba laga yaabo inuu hadda haysto. Sababtoo ah inta uu le'eg yahay ganacsiga elektaroonigga ah ee ka dhexeeya qaaradaha iyo baahida loo qabo in waraaqaha qaar lagu tarjumo luqado badan intii suurtagal ah, baahida loo qabo hibadani waa sii kordheysa.
Dhanka kale, waxbarashadu aad ayay muhiim ugu tahay goobtan. Turjubaanku waxa ay keenaysaa wax ka badan in si fudud loo hadlo. Waa inaad aqoon buuxda u leedahay luqadaha aad turjumayso.
Turjubaanadu waxay helaan lacag dhan $29 saacadiiba.
Shaqooyinka turjubaanka, hubi 17 -ka Madal ee ugu Fiican ee Bilawga ah 2022 -ka
Dhakhaatiir badan oo cilmi-nafsiyeedka ayaa sameeya daraasado aasaasi ah oo ku saabsan sida maskaxda aadanaha u shaqeyso. Waxay baaraan xusuusta iyo waxbarashada, iyo sidoo kale falcelinta kicinta bulshada, iyo sidoo kale sida iyo sababta aan uga fogaano waxbarashada. Tani waxay u baahan tahay shahaado.
Waxa kale oo ay cilmi-baadhis ku sameeyaan horumarinta hababka maskaxda ee carruurta, iyo sidoo kale ogaanshaha iyo daaweynta jirrada, iyada oo aan loo eegin in sababtu tahay organic, kiimiko, ama shucuur iyo garasho.
Shaqeynta waqti dhiman, waxaad heli kartaa ugu badnaan $44 saacaddii.
Jawaabta su'aasha ah waxa wakhtiga dhiman ee EA uu si weyn u kala duwan yahay iyadoo ku xiran heerka booska (ie cidda aad taageerto), cabbirka shirkadda, xafiiska aad ku sugan tahay (satellite ama shirkad), shaqada (yada) aad taageerto, haddii aad tahay qof ku caawin kara ama haddii kale, qaddarka admins-ka, iyo wixii la mid ah.
Waxaad kasban kartaa ugu badnaan $38 saacaddii oo aad shaqaynayso wakhti dhiman EA.
Akhri: 10 Bixinta Shaqooyinka Kaaliyaha Virtual ee Bilowga sanadka 2022
Farshaxanistaha isqurxinta ee wakhtiga dhiman ah, shaqooyinkaadu waa inaad u timaadid muuqaalka macmiilkaaga oo aad soo saarto quruxdooda dabiiciga ah oo laga yaabo inay qariso waxyaabo ay doorbidi lahaayeen inay qariyaan.
Farshaxanada waqti-dhimanka ah waxa la siiyaa $18.62 saacadii si ay u yimaadaan waxa ay jecel yihiin, markaa u bax baro haddii aanad jeclayn inaad samayso.
Ka shaqaynta sida saxafiye wakhti dhiman ah, wax badan ayaad gacmahaaga ku hayn doontaa isku day inaad dadka ka caawiso inay saxaan naxwaha xun iyo weedhaha aan dhamaystirnayn oo laga yaabo inaad xitaa dhaafto qoraallo dhaadheer oo ay dadku hore u sameeyeen laakiin aad jeclaan lahayd laba indhood oo kale.
Waxaad kasban kartaa ugu badnaan $35 saacaddii oo aad ka shaqaynayso proofreader.
Wakiilada CS waa xubno shaqaale ah ama shaqaale waqti dhiman ah oo adeegsada xirfadahooda dhegeysiga iyo dareenka si ay u caawiyaan xalinta xaaladda macaamilka. Dib-u-celinta macaamiisha waxay kasbadaan ugu badnaan $17 waxayna sii wadi karaan inay wax badan bartaan.
Ma dhammaanayaan tirada shaqooyinka wakhti dhiman ee ku siin kara iyada oo aan loo eegin cidda aad tahay. Looma baahna inay noqoto mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan saacadaha dhiman, laakiin waxay kaa caawinaysaa inaad kasbato ama kordhiso wax kasta oo aad kasbato.
Liiskan 20 ka shaqo ee ugu mushaharka fiican kuma caawinayo haddii aanad gacmahaaga isku dayin shay haddii liisku muhiim kuu yahay. Sida maahmaahdii tidhaahda, “Faraska durdurkaad u qaadi kartaa, laakiin kuma qasbi kartid inuu ka cabbo”.
Waqtiga Shaqada Qeybtii 101: Imisa Saacadood ayaa Shaqada Waqti -dhiman ah?
15 Shaqooyinka Internetka ee Waqti-Waqtiga ugu Fiican Sanadka 2022-ka
15 Shaqooyin Qayb-Waqti Ah Oo Ay Leedahay Caymiska Caafimaadka 2021-ka
Waa ayo Tababarayaasha Kulliyadda Mushaarka ugu Badan?
10 Injineerada Software -ka Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
Waqtiyadii dhawaa, carqaladaynta dhijitaalka ah ayaa ku soo duushay ku dhawaad ​​dhammaan qaybaha nolosheenna. Natiijo ahaan, baahida…
Markii qaar naga mid ah ay yaraayeen, waxaan ku riyoonnay inaan aadno hawada sare annaga oo aragna dhulka iyo…
10 Bixinta Shaqooyinka Kaaliyaha Virtual ee Bilowga sanadka 2022
Sida adduunku u sii fidaayo, sidaas oo kale ayaa suurtogalnimada ku dhex jirta. Dunidu waxay mar walba markhaati ka tahay…
Lacag intee le'eg ayay sameeyaan sawir qaadayaashu?
Waa riyada sawir qaade kasta in uu lacag ku helo waxa aad jeceshahay. Laakiin si riyadaas loo rogo…